နည်းပညာနှင့်သီတင်းရပ်ဝန်း: ယူအေအီးနိုင်ငံ သမ္မတ ရှိတ်ကာလီဖာ ရဲ့ဒေါ်လာ ၄၈၅ သန်းတန် ကိုယ်ပိုင်အဆင့် မြင့် ဇိမ်ခံသင်္ဘော...
ယူအေအီးနိုင်ငံ သမ္မတ ရှိတ်ကာလီဖာ ရဲ့ဒေါ်လာ ၄၈၅ သန်းတန် ကိုယ်ပိုင်အဆင့် မြင့် ဇိမ်ခံသင်္ဘော...
ယူအေအီးနိုင်ငံ သမ္မတ ရှိတ်ကာလီဖာ ရဲ့ဒေါ်လာ ၄၈၅ သန်းတန် ကိုယ်ပိုင်အဆင့် မြင့် ဇိမ်ခံသင်္ဘော...ကိုပီတာဘလော့မှကူးယူပါသည်...
ယခုသင်မြင်တွေ့ ရတဲ့ ပုံတွေကတော့ ယူအေအီးနိုင်ငံသမ္မတ၊ အဘူဒါဘီပြည်နယ် ရဲ့ စော်ဘွား ရှိတ်ကာ
လီဖာ ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ဇိမ်ခံသင်္ဘောပုံတွေဖြစ်ပါတယ်...
ထိုအပျော်စီးသင်္ဘောမှာ အိပ်ခန်း ၁၂ ခန်း၊ ရေကူးကန်ငယ် ( ဂျကပ်ဇ်ဇီ ) သုံးခု၊ ရဟတ်ယဉ် ( ဟယ်လီ
ကော်ပတာ ) ကွင်းတစ်ခု၊ လူ ၁၂ ရောက်လိုက်ပါနိုင်တဲ့ အသက်ကယ်လှေငယ်တစ်ခုအပြင် ရုပ်ရှင်ပြသ၊
ကြည့် ရှု နိုင်တဲ့ ခန်းမဆောင်တစ်ခုတို့ ပါ ပါဝင်ပါတယ်...
အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၄၈၅ သန်းပဲကုန်ကျပါလိမ့် မယ်...
ဒေါ်လာ ၄၈၅ သန်းဆိုတာ ဘယ်လောက်များရှိပါလိမ့် လို့ တွေးထင်နိုင်ပါတယ်...
( သူတို့ တိုင်းပြည်များက လူနေမှုအဆင့် အတန်းနဲ့ တွက်ယင်တောင် ) မိမိကိုယ်တိုင်အပါအ၀င်၊ ကိုယ့် 
ရဲ့ နောက်မျိူးဆက် ငါးခု လောက်တော့ ဘာမှအပူအပင်မရှိ အေးအေးလူလူထိုင်စားနိုင်လောက်အောင်
အဲဒီလောက်တန်ဖိုးရှိတဲ့ သင်္ဘောကိုပိုင်တဲ့ သူကတော့ ...
The pictures that you are about to see are the luxury yacht of Sheikh Khalifa bin Zayed al Nahyyan, the ruler of Abu Dhabi emirate and the president of UAE.
This yacht has 12 bedrooms, Jacuzzis, three swimming pools,ahelipad with helicopter,alifeboat to carry 12 persons andacinema hall. It’s very cheap, US$485 million only. How much is US$485 million? Not much, it only allows your next five generations to live without worries, not much actually, really!
Posted by peter kyaw | at 7:33 PM |0comments
Posted by Hajee Than Hla Oo at 1:09 PM